ဖျော်ဖြေရေး – Myanmar Live
Entertainment / ဖျော်ဖြေရေး
အတောမသတ်နိုင်သေး! ကစားသမားများ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရ အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ ထပ်မံရွေ့ဆိုင်းဖွယ်ရှိ
May 20, 2020 May 20, 2020 - by iampmy
ဘောလုံးပရိသတ်များ မျှော်လင့်စောင်းစားနေကြတဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ ကို ပြန်လည်ကျင်းပမယ့် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ယူကေအစိုးရနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံး …
Entertainment / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေး
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များကို ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင်ပြန်လည်ကန်ခွင့်ပေးမည်
May 19, 2020 May 19, 2020 - by iampmy
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွင်းယှဉ်ပြိုင်သည့်အားကစားများကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်၂၀၂၀ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များကို …
သတင်းများ / ဖျော်ဖြေရေး / မြန်မာ
မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆေးရုံ၌အသွားအလာကန့်သတ်ခံထားရသည့် ထိုင်းပြန်လူနာသုံးဦး သေဆုံး
April 10, 2020 April 10, 2020 - by peeraporn y.
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အများဆုံးပြန်လာသည့် ပြည်နယ်တခုဖြစ်သော မွန်ပြည်နယ်တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဆေးရုံ Quarantine …
ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် EFL တို့အကြား အရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်ရန်အတွက် PFA တောင်းဆို
March 27, 2020 March 27, 2020 - by peeraporn y.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများအသင်း PFA က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပေါ် ဆွေး နွေးရန် ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်တာဝန်ရှိသူများ အရေးပေါ် …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်တယ်လို့ အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူ အကြံပြု
March 25, 2020 March 26, 2020 - by peeraporn y.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူတွေက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ အတွက် အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူကတော့ ပရိတ်သတ်တွေကိုအစိုးရိမ်မလွန်ကြဖို့နဲ့ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းက ပိုပြီးထိရောက်တဲ့အတွက် …
လီဗာပူးပရီသတ်များပျော်ပြီ! ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များကို ရာသီပြီးဆုံးသည်အထိကျင်ပမည်
March 20, 2020 March 20, 2020 - by peeraporn y.
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲအပါအ၀င် အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကို ရာသီပြီးဆုံးတဲ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ဧပြီ …
ရုပ်ရှင်ရုံတွေပိတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဟု သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို ဆို
March 18, 2020 March 18, 2020 - by peeraporn y.
သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သလို စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေလက်ခံထားတဲ့ မိုးဟေကိုဟာ လက်ရှိမှာ ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်တဲ့ “မိုး”ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို ဦးစီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် …
ကိုရိုနာဂယက်တွေကြားထဲက အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၃၀ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်
March 13, 2020 March 13, 2020 - by peeraporn y.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid-19 ‌ကြောင့် ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်တွေတော်တော်များများရပ်နားရွှေ့ဆိုင်းထားကြပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ ရပ်နားမလား ရွှေ့ဆိုင်းမလားမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ တကယ်လို့ မရပ်နားသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်မှာ …
ကမ္ဘောဒီးယားမင်းသမီးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်မ ယ့်အကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
March 11, 2020 March 11, 2020 - by peeraporn y.
အနုပညာလောကထဲကို မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ဟာ အခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ Model တစ်ယောက်အဖြစ် …
မန်ချက်စတာဒါဘီမှာ ဘယ်အသင်းအသာရမလဲ?? ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၉ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်များ
March 6, 2020 March 6, 2020 - by peeraporn y.
ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲက ပရိသတ်တွေအတွက် ရင်ခုန်မှုပေးဦးမယ့် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ် ကတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ မန်ချက်စတာနှစ်သင်းရဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအရ အောင်မြင်မှုအရှိန်အ၀ါကြီး တဲ့ …